Bolivia: Nandrakotra ny Twitter ny Fitsampan-kevi-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2009 8:55 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, বাংলা, English
Maro ireo nitantara anaty twitter rehefa niverina avy amin’ny toeram-pifidianana nisy azy avy izy ireo ary nitatitra ny fizotran’ny asa teny. Soratan’i Rolando Espinoza (@darkho) ny momba ny vondrona tanora mpanohitraany ao Cochabamba, izay anisan’ny tonga teny amin’ny sekoly nandehanany nifidy:
Manaramaso ny lisitry ny solotena tao amin’ny trano fianarana antsoina hoe Loyola I #referendum Cbba (Cochabamba) juventud kochala
Mantanoratra I InLa Paz, Eliana Quiroz (@e_liana) hoe firy izao ireo nandany ny tontolo androny taorian’ny fanatanterahany ny andraikitra amin’ny maha-olom-pirenena azy
Henan’akoho no sakafon’ny sasany ary misotro Coca-cola kosa ny hafa rehefa vita ny fifidianana natao tao amin’ny tranon-tsekoly ambarotonga faharoa tao la Paz.
Nalefany an-tsary toa amin’ny Twitpic ny fanondrony misy ranomaintsy izay milaza fa avy nanatanteraka ny adidy amin’ny fifidianana izy.
Mahatsiaro tena hoe lavitry ny fonenany ny mpifidy sasany. Mifanipaka be ihany ny misy an’I Mario César Señoranis (@mariocesar_bo) avy any Santa Cruz sy ny misy ny renivohitra La Paz, ary miezaka ny mitady hevitra izy raha toa ka afaka mifidy;
Vao nifoha avy tao amin’ny torimasoko aho u_uzZzZ…Tsy mbola fantatro hoe amin’ny fomba ahoana no ahafahako mahazo ny taratasim-pifidianako amin’ity fitsapa-kevi-bahoaka ity, tokony hifidy any scz (Santa Cruz) ve aho, nefa anie aty lpz (La Paz) aho izao e. 8’(
Namorona kaonty manokana Twitter antsoina hoe @referendum_bo ny tranok’ala Al Minuto [es] mba entina hizarana zotra-pifandraisana (lien) ho an’ny vaovao izay manokatra ankariary ny toe-javatra, nametraka ihany koa ny varavarankely ifaneraserana entina ivohizana ny resadresaka mivantana anterineto sy ny fampielezana indray ny kirioka sasany (tweets).